Imbali yelogo yeNetflix | Abadali be-Intanethi
Imbali yelogo yeNetflix
Encarni Arcoya | 28/03/2022 09:33 | Ukuphefumlelwa
Umthombo wefoto Imbali yelogo yeNetflix: Tentulogo
Ngaba ucinga ukuba ilogo yeNetflix ibisoloko inje? Ewe, inyani yeyokuba hayi, phantsi kweli qonga lidumileyo lokusasaza kukho imbali yonke yelogo yeNetflix onokuthi ungayazi.
Ke sigqibe kwelokuba sikukhumbuze (kuba indala kakhulu) kwaye sikukhumbuze ngala maxesha ukuba itshintshe ilogo yayo kwaye wawungayazi. Ewe kunjalo, ineenguqu ezi-3 kuphela, enye yazo ibaluleke kakhulu. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yeyiphi?
1 Imbali yelogo yeNetflix
1.1 Ilogo entsha yeNetflix
1.2 I-2014, unyaka wokutshintsha kunye nokufika kwelogo ephindwe kabini
2 Imbali yelogo yomculo yeNetflix
Ngokucacileyo, imbali yelogo yeNetflix inxulumene nokuvela kwale nkonzo yokuzonwabisa. Kodwa bambalwa abayaziyo imvelaphi yeNetflix, okanye kutheni kubaluleke kangaka ukuqonda ifilosofi yenkampani.
Kule meko, i-Netflix yazalwa ngo-1997. Abazali bayo, abadali, kunye namaqabane ayenguMarc Bernays Randolph kunye noWilmot Reed Hastings Jr., bobabini baseCalifornia.
Babegxile kwishishini lokurenta ngevidiyo, iivenkile zevidiyo eziqhelekileyo ezazikho ngelo xesha. Kodwa ngomahluko omncinci. Yaye kukuba endaweni yokuba ibe ngabathengi ekufanele baye evenkileni, yayingabo ababethatha iiodolo okanye bazithumele ngeposi. Ngamanye amazwi, ibiyividiyo ekwi-intanethi okanye iDVD erentwayo ngeposi.
Emva konyaka bephila, babenabasebenzi abangama-30 kunye neeDVD ezingaphantsi kwewaka ababeza kusebenza nabo. Kodwa ukususela ngaloo mhla impumelelo yakhe yaqala ukunyuka, kangangokuba yakhula ngokukhawuleza.
Igama laloo nkampani? Netflix. Kwaye ngokucacileyo, uphawu lwabo lwalukwayimbonakaliso yento abayenzileyo, kodwa inyaniso kukuba yayahluke kakhulu kwindlela esiyibona ngayo ngoku.
Ukuqala, ilogo yayimnyama, inoonobumba abaqhelekileyo. Kwaye bahlukana. Ifunde iNet kwelinye icala, kunye neFlix kwelinye. Kwakhona, zombini u-N kunye no-F babebakhulu kancinane kunabo bonke abanye oonobumba.
Kwaye yintoni eyahlula igama? Ewe, iteyiphu eyayilinganisa ifilimu yefilimu enemigca emnyama nemfusa.
Kwiminyaka emi-3, wayigcina le logo. Kuze kube, ngokufika kuka-2000, kwabakho utshintsho lobuso.
Ilogo entsha yeNetflix
Unyaka we-2000 awuzange uzise utshintsho lwenkulungwane kuphela, kodwa kwiNetflix, eyayiqala ukuzinza njengenkampani eyaziwayo, yazisa notshintsho lwelogo. Ngokuqinisekileyo, eyokuqala yahlala iinyanga ezimbalwa kuphela, yanyamalala phantse ngokupheleleyo kwaye bambalwa kakhulu abaziyo ngayo.
Imbali yelogo yeNetflix ngoku itshintshela kwenye, ishiya ngasemva eyokuqala kwaye ifake enye enemvelaphi ebomvu. Ngaphezulu, oonobumba abenziwe ngobuchule beCinemaScope yakudala, emhlophe kwaye erhangqwe ludwebo olumnyama olufanisa ukuba baphuma kwiscreen, besenza isiphumo se3D. Zombini i-typography kunye nemibala iyatshintsha.
Kwaye kukuba basuka kumnyama ukuya kumhlophe ngoonobumba kwaye ukusuka kumhlophe ukuya kubomvu ngasemva. Oonobumba are sans serif, oko kukuthi, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuchuma okanye isiphelo esihle, zonke zilingana, kodwa zifakwe kancinci kwi-arch ephantsi.
Ngokubonakalayo, ngakumbi xa ujonge uphawu, banokubonakala behamba ngenxa yesiphumo somda omnyama onomthunzi, obenza bavelele kuyilo.
Babeyithanda kakhulu le logo kangangokuba inkampani yayigcina iminyaka eyi-14, de ngo-2014 yagqiba ekubeni iyitshintshe kwakhona.
I-2014, unyaka wokutshintsha kunye nokufika kwelogo ephindwe kabini
Ngo-2014 inkampani yagqiba ekubeni lixesha lotshintsho lwehlabathi. Kwaye ngenxa yoku, bathembela umsebenzi kaGretel, inkampani yoyilo yaseNew York eyabakhokelela ekubeni bayile umfanekiso omtsha wenkampani eyayivela ngamandla, kungekhona eMelika kuphela, kodwa kwihlabathi lonke.
Kwaye benza ntoni? Ukuqala, basusa imvelaphi ebomvu, bayenza ibe mhlophe. Kodwa loo nto ibomvu yayisetyenziselwa ukubeka igama lenkampani, iNetflix. Kwakhona basusa izithunzi kunye neentsontelo zoonobumba ezazisenza amagama abalasele. Kwaye ngelixa begcina loo nto incinci ye-arcing slant, bayithambisa, okanye ubuncinane ngokususa izithunzi kunye nemiphetho ibonakala ingenampembelelo encinci.
Ayizange itshintshe kakhulu kwi logo yangaphambili, kodwa baye badibanisa yonke into ukwenza oku.
Kwi-2016, iminyaka emibini emva kwelogo entsha, i-logo ephindwe kabini yafika. Kwaye kukuba, ngenxa yesidingo sokuba ne-logo encinci, kwizicelo, kwiifowuni eziphathwayo, iipilisi, njl. babedinga into ehlala emgceni kodwa efundekayo. Kwaye ngokucacileyo igama elithi Netflix lalilikhulu kakhulu ukuba ligqame njenge icon okanye ilogo yeapp.
Le yindlela eyazalwa ngayo loo logo yesibini, ngokuqinisekileyo onayo kwiselula yakho. Into abayenzayo yayigxininise kuphela kwi-N. Kodwa kungekhona i-N ye-logo, kodwa bayidala ngokwenene kwaye ukuba ujonga kancinci uya kubona ukuba ikhangeleka njengesaphetha esigotywe ngokwaso sidala unobumba N. yindlela abayila ngayo .
Ukuyenza ibonakale, imhlophe ayinakuba, kuba "idla" umbala kakhulu kwaye ayizalisekisi injongo yayo, ngoko bakhetha umnyama kwaye ubomvu besaphetha ngokwawo bubumnyama njengokungathi iintonga zecala zingasemva. isaphetha kunye nesiwela icala elichanekileyo.
Imbali yelogo yomculo yeNetflix
Ukuba ungene kwiNetflix kwaye ubone nayiphi na imuvi okanye uthotho lwangaphambili eqongeni, uya kwazi ukuba okokuqala badlala umculo omncinci onelogo yenkampani. Uyakhumbula?
Ewe, kuya kufuneka uyazi ukuba le logo ye-sonic yenziwe nguHans Zimmer, umqambi odumileyo ophumelele iimbasa ezininzi zomculo. Nguye owenza ukuba i-N ebesithetha ngayo ngaphambili ihlaziywe kunye nomculo kunye nee-animators, ngendlela yokuba luhlobo lwesilumkiso kwabo bazokubukela uthotho okanye imuvi. Njengoko kwakusenzeka kwiindawo zemidlalo yeqonga, emva kwezibhengezo kunye neetreyila zezinye iifilimu, kwafakwa enye eyayilumkisa ukuba oko babeye kukubona kuyaqala.
Ngokukodwa, i-logo yandiswa ukusuka kwi-0,4 imizuzwana ukuya kwi-0,17 imizuzwana. Lincinci ixesha, kodwa sonke siya kube siyibonile igqityiwe. Kwaye siya kube sivile.
Ngoku ekubeni uyayazi imbali yelogo yeNetflix, ngokuqinisekileyo uya kuyibona ngokwahlukileyo. Yeyiphi kwiilogo oyithanda kakhulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imbali yelogo yeNetflix
Imbali yelogo yeLacoste